Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247590 times)
« Reply #420 on: August 04, 2011, 12:57:35 PM »
" အ ရေး တ ကြီး "
စတိုးဆိုင်တွင် ဖြစ်သည် ။ တန်းစီနေသည့် လူတန်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး
ပီတာလေး အရောင်းစာရေးမ ကို ပြောသည် ။
" ကျနော့်ကို တန်းမစီခိုင်းဘဲ ရောင်းပါလားခင်ဗျာ... ကျနော့် အဖေ အရေး
တကြီး စောင့်မျှော်နေလို့ ပါ.. "
" ကောင်းပါပြီကွယ်...ကိုင်း ဘာလိုချင်လို့ လဲ..ပြော "
" အိမ်သာသုံး စက္ကူ "
« Reply #421 on: August 04, 2011, 01:04:59 PM »
မိန်းမက ယောင်္ကျားကို စိတ်ညစ်သံဖြင့် ပြောသည် ။
" ကျမတို့ သားလေးကို ကျမ မထိန်းနိုင်တော့ဘူးရှင့် "
" ဒီနေ့ဘာလုပ်ပြန်လို့ လဲ.. "
" ဘာလုပ်ရမှာလဲ..... ဒီနေ့ကျမတို့ကျောင်းက ပြန်လာတော့ သားငယ်က မေးတယ်..
ဟို လမ်းဒေါင့်က မျက်နှာတစ်ခုလုံး မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းထားတဲ့ မီနီစကပ်နဲ့မိန်းခလေး
ဘာ ပစ္စည်း ရောင်းနေတာလဲ တဲ့.. "
" ဟာ.....မင်းကလဲ.....ဒါများ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်လို့ကလေးတွေဘာဝ သိချင် စပ်စုချင်
တာနဲ့မေးတာ ဖြစ်မှာပါ.. "
" ဟုတ်တော့ ..ဟုတ်ပါတယ်.... ဒါပေမဲ့ ဆယ့်ငါးမိနစ် အတွင်း သူ့ စုဘူးကို ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်
« Reply #422 on: August 04, 2011, 01:12:06 PM »
" အ ဖော် လို တယ် လေ "
ရုရှား အီဗန် မိန်းမကို ခွင့်တောင်းသည် ။
" မိန်းမရေ... မနက်ဖန် အိမ်နီးချင်းနဲ့ငါ ငါးသွားမျှားပါရစေကွာ.. "
" ဘယ် အိမ်နီးချင်းနဲ့လဲ.. "
" တို့ အိမ် ဘယ်ဘက်ခန်းက အင်ဒရေ နဲ့လေကွာ.. "
" အင်ဒရေ နဲ့ ဆိုရင် မသွားရဘူး... "
" ဘာဖြစ်လို့ လဲကွာ.. "
" အိမ်မှာ ကျမ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေမှာပေါ့ရှင့် "
« Reply #423 on: August 04, 2011, 01:33:03 PM »
" ဒီ တစ် သက် တော့ ပြတ် ပြီ "
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကြေးနန်းရုံးသို့ရောက်လာပြီး ပုံစံစာရွက်တွင်
ကြေးနန်းစာ ရေးသည် ။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ ။ ရေးပြီးသား စာရွက်
ကို ဆွဲဆုတ်ပစ်ပြီး နောက်တစ်ရွက် ထပ်ရေးသည် ။ မကြိုက်ပြန်တာနှင့်
နောက်တစ်စောင် ထပ်ရေးပြန်သည် ။ တတိယအကြိမ် ရေးထားသော စာ
ရွက်ကို ကြေးနန်းရုံး စာရေးမ လက်ထဲအပ်ပြီး " မြန်မြန်ပို့ ပေးပါနော် " ဟု
ထိုအမျိုးသမီး ထွက်သွားပြီးနောက် စာရေးမ က စောစောက ကြေးနန်းစာ
နှစ်စောင်ကို ကောက်ယူပြီး စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်ကြည့်သည် ။ ပထမ ကြေး
နန်းမှာ " ရှင် နဲ့ ကျမ ဒီတစ်သက် ပြတ်ပြီ...။ ရှင့်မျက်နှာကို ကျမ မမြင်ချင်
ဘူး..။ ကျမကို ဖုန်းလည်း မဆက်ပါနဲ့" ။ ဒုတိယ ကြေးနန်းကို ဆက်ဖတ်
သည် ။ " အယူခံ ၀င်ဘို့မကြိုးစားနဲ့ ..။ ကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ပြောင်းထားပြီ "
နောက်ဆုံးပို့ ဖြစ်သည့် ကြေးနန်းမှာ " အစောဆုံး ထွက်တဲ့ ရထားနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ.
« Reply #424 on: August 04, 2011, 01:49:07 PM »
" တစ် မြို့လုံး က မီး ထိန် ထိန် "
ငါးဖမ်းသင်္ဘောသားအဖြစ် ကိုချူချာ ပထမဆုံးအကြိမ် သင်္ဘောလိုက်ဖို့ဖြစ်လာသည် ။
မိန်းမဖြစ်သူကို စိတ်မချသဖြင့် အ်ိမ်နီးချင်းကို မှာသည် ။
" ငါ့ မိန်းမကို စောင့်ရှောက်ပါကွာ.. "
" စိတ်ချသာ သွား.. ။ တစ်ကယ်လို့တစ်စိမ်းယောင်္ကျား တစ်ယောက်ယောက် မင်းမိန်းမ
ဆီ လာတယ်ဆိုရင် မင်း အိမ်ခေါင်မိုးမှာ တပ်ထားတဲ့ မီးလုံးကို ငါ ထွန်းလိုက်မယ်.. "
ည ဆယ်နာရီ တိတိတွင် သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းမှ ခွါသည် ။ ခပ်လှမ်းလှမ်း ရောက်သည့်
အချိန် ကိုချူချာ ဆိပ်ကမ်းမြို့ လေးကို လှမ်းမျှော်ကြည့်သည် ။ မြို့ ထဲက အိမ်ခေါင်မိုးတွေ
မှာ နေရာအနှံ့မီးလုံတွေ လင်းနေသည်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်သက်သာရဟန်နှင့် ကိုချူချာ
" မိန်းမ ထားခဲ့ရတာ.. ငါ တစ်ယောက်ထဲတော့ ဟုတ်ဟန် မတူဘူး.. "
« Reply #425 on: August 04, 2011, 03:45:06 PM »
" ပ ညာ ပြ လိုက် သည် "
အသားအရောင်ခွဲခြားရေးဝါဒီ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးသည် ဘယ်နေရာ
ဘယ်ဒေသ က ကူးလာသည်မသိ..။ အရေပြား ရောဂါ ရလာသည် ။ မျက်နှာ အပါအ၀င်
တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အဖုအပိမ့်များ ပေါက်လာသည် ။ မည်သူမျှ ၄င်းနှင့် အဆက်အဆံ မလုပ်
ချင်ကြတော့..။ ဒီအတိုင်းသာ ဆိုလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်တော့မည် ။ ဆရာဝန်တွေ
ဆီ သွားပြသည် ။ မည်သူမျှ အကူအညီ မပေးနိုင် ။ နောက်ဆုံး အခြားတစ်မြို့ တွင်ရှိသော
အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်ထံ သွားပြကြည့်ပါ ဟု တစ်ယောက်က အကြံပေးသည်နှင့် ထိုမြို့ 
သို့ ရောက်သွားသည် ။
ဖြစ်ချင်တော့ ဆရာဝန်ကြီးမှာ အသားမည်း နီဂရိုး ဖြစ်နေလေသည် ။ မတူမတန် သူ့ ဆီက အ
ကူအညီ တောင်းရမည်ဖြစ်၍ လုံးဝ မကျေနပ် ။ မတတ်နိုင် ။ ဤ မကျေနပ်စိတ်နှင့်ပင် ဆရာ
၀န်၏ အခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း စပြောသည် ။
" ဟေ့..မျောက်ကြီး...၊ ငါ့ရဲ့အရေပြားဟာ မင်းလိုပဲ ရွံစရာကောင်းနေတာ တွေ့ တယ် မဟုတ်
လား...၊ အဲ့ဒါ ပျောက်အောင် လုပ်ပေးစမ်း..၊ ကြားလား...အကောင်စုတ်. "
ဆရာဝန်ကြီး စိတ်ဆိုးသည့် အမူအရာ လုံးဝ မပြပဲ လူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် ။ ပြီးစီးသော
အခါ တည်ငြိမ်သော အသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ဟော့ဒိ ဆေးပြားတွေကို ယူသွားပါ..၊ မနက် တစ်လုံး ၊ ညနေ တစ်လုံး ၇ ရက်တိတိ သောက်ပါ
ဒါ့အပြင် ခွေးချေး ကို ခပ်ပျစ်ပျစ် အရည်ဖျော်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး လိမ်းပါ ။ တစ်ခါလိမ်းရင် တစ်
နာရီ ကြာအောင် ထားပါ..။ ၇ ရက် လိမ်းပါ.. "
" ဘာပြောတယ်. "
" လူကြီးမင်း အတွက် နှစ်သက်စရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော် နားလည်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ရောဂါ
ရောဂါပျောက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော် ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်မှ ဖြစ်ပါမယ်..။ တစ်ခြား နည်းလမ်း
" ကောင်းပြီ...မျောက်စုတ်..။ ဒါပေမဲ့ မင်းကို ငါ ကြိုတင်ပြီး သတိပေးထားမယ်..။ မင်း ပြောတဲ့အတိုင်း
လုပ်လို့ မှ မပျောက်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီနားက သစ်ပင်မှာ မင်းကို ငါ ကိုယ်တိုင် ကြိုးဆွဲချ သတ်ပစ်မယ် "
အထက်ပါအတိုင်း ကြိမ်းမောင်းပြီး အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ထွက်သွားသည် ။ နောက်တစ်
ပါတ် အကြာတွင် ပြန်ရောက်လာသည် ။ နီဂရိုး ဆရာဝန်၏ အခန်းထဲသို့ဝင်သည် ။ ဆရာဝန်ကို ၄င်း၏
လက်ထောက်နှင့်အတူ တွေ့ ရသည် ။ လူဖြူ အမေရိကန် ၀မ်းသာအားရ ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ.. ကျနော့် ရောဂါ ယူပစ်သလို ပျောက်သွားပြီ. .။ ဒေါက်တာ့ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်ရမလဲ
တောင် မသိတော့ဘူး..။ တစ်ကယ့် အံ့ဘွယ် ပါပဲ..။ ခွေးချေး ဟာ ဒီလောက်တောင်ပဲ အစွမ်းထက် သ
လားဗျ ဟင် "
ဤတွင် အသားမည်း ဆရာဝန်က ဆေးပညာ ဝေါဟာရများဖြင့် ခွေးချေး တွင် ပါဝင်သော ဓါတ်များကို
ဖော်ပြပြီး ၄င်းပေးလိုက်သော ဆေးပြားနှင့် တွဲဖက်လိုက်လျှင် မည်သည့် အရေပြား ရောဂါကို မဆို ပျောက်
ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည် ။
ဆရာဝန်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကာ အမေရိကန်သူဌေး ပြန်ထွက်သွားသည် ။
၄င်း ပြန်ထွက်သွားသည်နှင့် ဆရာဝန်က ၄င်း၏ လက်ထောက်ကို ပြုံးပြီး ပြောသည် ။
" အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် တို့ ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးပြားနဲ့ တင် ဒီလူ့ရောဂါ ပျောက်ပါတယ်ကွ..ဟဲ .ဟဲ. ဟဲ "
« Reply #426 on: August 04, 2011, 04:01:47 PM »
" သောက် နိုင် ပါ သော် လည်း "
အမေရိကန် တိုးရစ် က ရုရှား အီဗန်ကို မေးသည် ။
" ရုရှားလူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရက်အသောက်နိုင်ဆုံး လို့ပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်..
အခု ရုရှားကို ရောက်တုန်း သေချာချင်တာနဲ့မေးပါရစေ....။ ဗော့ဒ်ကာ တစ်ဖန်ခွက်ကို
ကုန်အောင် ခင်ဗျား သောက်နိုင်ပါ့မလားဗျ..ဟင် "
" သောက်နိုင်တာပေါ့... သခွားချဉ်လေးနဲ့ ဆို အိုကေပဲ.. "
" ဖန်ခွက် သုံးခွက် ဆိုရင်ကော "
" သောက်နိုင်ပါတယ်...သခွားချဉ်လေး သုံးလုံးနဲ့ ဆို အိုကေပဲ.. "
" ဖန်ခွက် တစ်ရာ ဆိုရင်ကောဗျ "
" ဟေ့ လူ.. ခင်ဗျား ရူးနေသလား.. သခွားချဉ် ဒီလောက်များများ ကျူပ် ဘယ်စားနိုင်ပါ့မလဲဗျ "
« Reply #427 on: August 04, 2011, 04:05:34 PM »
" ကောင်း သ တင်း "
" ကျမ ရှင့်ကို သတင်း နှစ်ခု ပြောစရာ ရှိတယ်..ကောင်းတဲ့ သတင်းနဲ့ 
မကောင်းတဲ့ သတင်း "
" ပြောလေ.. "
" ရှင့်ကို ကျမ မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး... "
" မကောင်းတဲ့ သတင်းကကော.. "
« Reply #428 on: August 05, 2011, 10:30:52 AM »
" ဘွဲ့တံ ဆိပ် များ ပိုင် ရှင် "
" ဦးရဲ့ရင်ဘတ်မှာ ဘွဲ့ တံဆိပ် သုံးခု တပ်ထားတာကို မြင်ပါတယ်...
ဘာအတွက် ဘွဲ့ တံဆိပ်တွေ ချီးမြှင့် ခံရတာလဲ ဟင် "
" တတိယ တံဆိပ်ကတော့ အရင်က တံဆိပ် နှစ်ခု ရထားပြီးသူ ဖြစ်လို့ 
ထပ်ပေးတာပဲ...။ ဒုတိယ တံဆိပ်ကတော့ ပထမ တံဆိပ် ရှိပြီး ဖြစ်လို့ ပဲ
အဲ..... ပထမ တံဆိပ်ကတော့..ဘာမှ မရသေးလို့ပေးထားတာပဲ ကွယ့် "
« Reply #429 on: August 05, 2011, 10:38:53 AM »
" အ ပတ် တိုင်း ရ ချင် တယ်. "
ဧည့်သည်၏ မျက်နှာ မသာမယာ ပုံသဏ္ဍာန် ပေါက်နေသဖြင့် အိမ်ရှင်က မေးသည် ။
" ခင်ဗျား မျက်နှာ မကောင်းပါလား... ဘာဖြစ်လို့ လဲ.. "
" ခင်ဗျားပဲ စဉ်းစားကြည့် ..။ လွန်ခဲတဲ့ သုံးပတ်က ကျနော့် အဖိုး ဆုံးသွားတယ်.. ကျနော့်
အတွက် အမွေ ဆိုပြီး ဒေါ်လာ သုံးသောင်း ထားသွားတယ်. "
" ဒီလောက်ငွေဟာ ဘယ်နည်းမလဲဗျ.. "
" လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်က ကျနော့် အဒေါ် သေတယ်..။ ကျနော့်အတွက် ဒေါ်လာ တစ်သောင်း
" ဟန်ကျတာပေါ့... ဒါနဲ့ များ ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာ မကောင်း ဖြစ်နေရတာလဲ.. "
" လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျနော် တစ်ပြားမှ မရဘူးလေဗျာ.. "